A weebụsaịtị zara ajụjụ nke ahụ e kachasị nke na mobile ọrụ nwere ịrịba uru. Nke mbụ, onye ọrụ nke na-eleta ma na desktọọpụ ma na mkpanaka ga-enwe ahụmịhe yiri ya, na-enyere ha aka ịnyagharịa ma chọta ozi ha chọrọ ngwa ngwa. Nke abụọ, akara ngosi ahụ ga-adaba na ọmarịcha. Nke atọ, saịtị ahụ nwere ike ibudata ngwa ngwa… kama ịgbanye okporo ụzọ, CSS na-ebuli elu.
Jun 6, 2016 na 9:04 nke ụtụtụ
Ọ dị ka ọtụtụ n'ime data a laghachiri na 2013-2014 (mara mma maka ụdị ngwa ngwa dị otú ahụ na-agbanwe agbanwe na teknụzụ teknụzụ). Ọ nwere ọnụ ọgụgụ ọhụrụ ọhụrụ?
Hey Douglas, ọnụnọ ekwentị kwesịrị maka azụmaahịa ọ bụla, kwuru n'ezie. Ọ bụghị nanị na enwekwu ndị lekwasịrị anya ahịa na-eme ka ha dị mfe ma ọ pụkwara ịbụ ihe kasị mma iji nweta ọhụrụ ọrụ na-hụrụ site na ha na mbụ ebe. Dị ka azụmahịa ọ bụla ga-abụrịrị ndị ahịa na-eche maka ịga nke ọma, ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyi ga-abụrịrị n'ụwa ịghọ dijitalụ kwa ụbọchị. Daalụ nke ukwuu!